Umjikelo wobomi omangalisayo wesalmon | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Intlanzi, Ukuzaliswa kweentlanzi
Iisalmons zaziwa njengeentlanzi ezaziwayo ngokwenza izinto ezininzi ngexesha lomjikelo wobomi obunomtsalane kunye nobodwa. Phantse wonke umntu ukhe weva uhambo oludumileyo lwesalmon ukuze lukwazi ukuvelisa kwakhona. Yiyo le nto eyenza ukuba le ntlanzi ikhetheke kwaye iyingqayizivele, kuba ingumzekelo wokuxhathisa kunye nokuzimisela ezinokuthi izilwanyana zibe nako ngenxa yokuzala kunye nokuphila.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngeenkcukacha ze Umjikelo wobomi besalmon kunye nomnqweno wakho?
1 Imbali yesalmon
2 Umjikelo wobomi besalmon
2.3 Buyela kumama umlambo
2.4 Ukuveliswa kwakhona
Iisalmons zezodidi I-Oncorhynchus kunye nosapho lwe-salmonid. Zizintlanzi ezinobungozi, oko kuthetha ukuba phuhla kwimeko yolwandle kwaye emva koko uphile emanzini amnandi. Bayakwazi ukuhlala kuzo zombini ezi ntlobo zetyuwa. Indawo yokuhanjiswa kwayo isemantla oLwandlekazi lwePasifiki kunye nezinye iintlobo kufutshane neGulf of Mexico.
Umhla apho i-salmon yokuqala yavela khona kwiplanethi yethu awukaziwa kakuhle, kodwa kuyaziwa nangakumbi ukuba bakwiqela leentlanzi ezithunyelwe kakhulu kwaye ezi zazilawula iilwandle ngexesha leCretaceous. Oku kubuyela kwixesha lokuhlala kweedinosaurs malunga neminyaka engama-135 yezigidi eyadlulayo. Ukusukela ngoko, isalmon ibinomjikelo wobomi obukhetheke kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlanzi. Ngexesha lohambo olude lweminyaka ezizigidi ezingama-60, zonke iifowuni zithe saa kwilizwe lonke kwaye ziye zaneenkqubo ezahlukileyo kakhulu ezivela kwenye nenye.
Ngexesha lenkqubo yendaleko, isalmon ikhethe ukuhlala kumanzi abandayo kunye neoksijini kumantla eikhweyitha. Oososayensi bazamile ukuqonda izizathu ezikhokelela isalmon ukuba ibuyele ekuzaleni, nangona kunjalo, abakabinako ukufikelela kwizigqibo ngayo.
Umjikelo wobomi besalmon
Umthombo: UDavid Alvarez http://www.naturalezacantabrica.es/2012/01/
I-Salmon iqandusela kumaqanda abo kwimilambo yamanzi acwengileyo. Ngokwesiqhelo, kusekwindla xa imazi nenkunzi zibeka amaqanda emilanjeni ukuze ziwadibanise kwindlwana eyakhiwe ngomhlaba. Emva kweenyanga ezimbalwa zokufukama, amaqanda aqandusele kunye nefry salmon eqanduselwe. Bahlala iiveki ezimbalwa kwigravel apho bafumana khona izakhono zokudada. Xa kufika intwasahlobo kwaye amaqondo obushushu enyuka, inegalelo kutshintsho lweemeko zokusingqongileyo ezithanda ukufunda kwamantshontsho, ashiya igrabile kwaye aqale ubomi bawo bokuzimela.
Zininzi iingcali ezifunda umjikelo wobomi be-salmon kwaye, ngaphezulu kwako konke, eli nqanaba lobomi babo, kuba kwenziwa iinzame zokuchaza indlela isalmon eyazi ngayo ukuba kufuneka ibuyele kunina umlambo ukuze izale.
Xa i-fry inkulu kwaye izimele ngakumbi, bayadada ngasemlanjeni de bayokungena elwandle. Xa sele bekhona bayadada kwaye bazulazule iilwandle ngamaxesha ahlukeneyo ngokuxhomekeke kwisalmon nganye. Ngeli xesha bafumana ukutya kunye nendawo yokuhlala. Nje ukuba ixesha lidlule kwaye njengabantu abadala, isalmon izame ukubuyela kwindawo yokuzalwa ukuze izale ize ivelise kwakhona. Ewe, le ndlela icacile. Khawufane ucinge ukuba kuya kufuneka badade babuyele ngakumjelo womlambo abazalelwa kuwo. Ngokucacileyo ayizizo zonke iisalmon ezisindayo ukuxela ibali. Indlela eya emlanjeni kanina igcwele ubunzima kunye neengozi.
Buyela kumama umlambo
Xa befika emlonyeni womama ongumama baqala ukunyuka ngokwamaqela ukuba amanzi awaxokozanga kakhulu kwaye kwimeko yomlambo omkhulu kakhulu ezinye iintlobo zikwenza zilandelelana. Ngexesha lokunyuka komlambo kufuneka baphephe ii-eddies zamanzi, amatye amakhulu, amabhere kunye nezinye izilwanyana, imithi embindini womlambo, ungcoliseko oluvela kwizikhongozeli nakwiiplastiki, kwaye konke oku kunxamnye nomsinga. Yonke le miqobo zibangela imeko embi kumzimba we-salmon ezenza inkangeleko yazo ibe mandundu ngokuthelekiswa nexesha lokuhlala kwabo elwandle.
Nje ukuba bakwazi ukunyuka bawuphumeze wonke umlambo, bafike kwindawo yokuzalela apho bazalelwa khona. Ikwayindawo enye apho bazalele khona kunye nabo bonke ookhokho babo. Kule ndawo bayaqhubeka nokuhlala bade bavuthwe ngokwesondo kwaye bazalise. Nje ukuba bakulungele ukuzala, imazi iyadada ngasezantsi kwemilambo ukuze yakhe indlwana apho ibeka khona amaqanda. Ngelixa imazi isakha indlwane, inkunzi igxotha ezinye iinkunzi ezinomtsalane emfazini.
Imazi isebenzisa umsila wayo ukuyitshangatshangisa kwaye yakhe indlwane phakathi kweesentimitha ezingama-40 ukuya kuma-50. Ngamanye amaxesha, njengokuba ezinye iinkunzi zizama ukungena kwindlwana eyakhiweyo yimazi, imazi yenza ngogonyamelo ukugxotha abangeneleli. Olu lwakhiwo lwendlwane lubathatha iiyure ezimbalwa, ukusukela oko umntu obhinqileyo ukhetha kwaye ajoyine amatye abonakala efanelekile ukwenza "imbeleko" apho i-salmon entsha iza kuzalelwa khona. Ukongeza, zinokwakha ukuya kwindlwana ezintlanu ngelixa zijonga umgangatho kunye nobunzulu.
Nje ukuba bazakhele iindlwane, imazi ivumela inkunzi ukuba ime ecaleni kwayo ukuze, kwangaxeshanye, imazi ikhuphe amaqanda kunye nendoda isidoda. Ngale ndlela kwenzeka ukuchumisa. Xa amanzi eqhaqheka kulwelo lwencindi yobudoda, imazi ijonge amaqanda emazantsi endlwane ize ingxame ukuwagubungela ngelixa ijiwuzisa umsila wayo njenge fan. Le ntshukumo yenziwa ngaphandle kokuchukumisa naliphi na ilitye kwaye kuyenziwa ukwenza umsinga oshukumisela amaqanda kwigrabile ukuthintela ukonakala kwaye akhuselwe kakuhle.
Njengoko isenzo siphela kwindlwana enye, sakha esilandelayo. Kwinto nganye ibeka phakathi kwamaqanda angama-500 ukuya kuma-1000. Ngexesha leentsuku ezilandelayo uyabagubungela ukuze abakhusele ade afe.
Kubaluleke kakhulu ukuba eli nqanaba lokugqibela lihambe kakuhle ukuze i-fry entsha ikhule. Yiyo loo nto ungcoliseko kunye notshintsho lomntu emilanjeni zizinto ezenza kube nzima kakhulu ukuba i-salmon ivelise kwakhona. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, izazinzulu zikhangela izizathu zokuba i-salmon izala kuphela kunina umlambo hayi kwenye indawo. Kude kube ngumhla Akukho bungqina bufunyenweyo ukuba kutheni. Bacingelwa ukuba banee-receptors kwinkqubo yemithambo-luvo ezisebenzisa imeko yezendalo ababehlala kuzo "njengezikhumbuzo" zokubuyela apho bazalele izizukulwana ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Umjikelo wobomi omangalisayo wesalmon
IHERIBERTO GRAHAM MORA sitsho
UThixo uyaqhubeka esikelela, upapasho olugqwesileyo, ubabalo lwezenzululwazi kunye nemifanekiso.
Phendula HERIBERTO GRAHAM MORA
Yenze iimvakalelo ezininzi kum. Enkosi
Kucacisiwe kakuhle ngobomi besalmon. Enkosi.
Lorena Garcia sitsho
Umjikelo wobomi walezi ntlanzi awukholeleki, yinto entle kakhulu, kubangela ukuba ndiqwalasele kakhulu njengoko bekhumbula kakuhle apho bevela khona kwaye kufuneka babuyise into efanayo eyenzekayo ngabantu esivela phezulu kwaye siyabuya xa sisifa kodwa eyona nto iphambili kukubuyela kwethu kucocekile okanye kumdaka
Phendula lorena garcia